Cologne Bonn manitatra tamba-jotra mankany Slovakia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cologne Bonn manitatra tamba-jotra mankany Slovakia
Volana vitsivitsy monja taorian'ny nanombohan'ny zotram-pitaterana lafo indrindra (ULCC) ho an'i Craiova sy Tuzla, mampifandray ny seranam-piaramanidina Cologne Bonn amin'i Slovakia i Wizz Air. Fankalazana ny serivisy vaovao anio, ny rohy indroa isan-kerinandro mankany Košice dia nanomboka ny 25 Jona, nampiasa ny A180 an'ny seza 320-an'habakabaka amin'ny sehatra 1,040 kilometatra.
"Ny tambajotranay mankany amin'ny tsena Eoropa atsinanana manan-danja dia mitombo hatrany noho ny Wizz Air, izay mahafaly anay," hoy i Michael Garvens, filohan'ny Birao fitantanana, seranam-piaramanidina Cologne Bonn. Nanampy izy hoe: “Koa satria orinasa Alemanina maro no nanorim-ponenana any Košice sy ny manodidina azy, ny toerana vaovao haleha avy any Cologne Bonn dia manintona tsy ho an'ny mpizahatany ihany fa ho an'ny mpandeha raharaham-barotra ihany koa.”
Ny fanitarana vao haingana nataon'ny Wizz Air avy tany Cologne Bonn dia midika fa ny rohy mankany amin'ny tanàna lehibe indrindra any Slovakia dia lasa làlana fahavalo an'ny ULCC avy amin'ny seranam-piaramanidina Alemanina. Mandritra ny fandefasana ny asany voalohany mankany Slovakia, ny tambajotran'i Cologne Bonn dia misy fifandraisana 14 ao anatin'ny faritra Eoropa Afovoany sy Atsinanana.